စာပေယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြင်ပကလောင်ရှင် မေစာက ‘စာဝိုင်း ပေဝိုင်း စကားဝိုင်း’ အစီအစဉ်ကို အပတ်စဉ် ကြာသပတေးနေ့ ညတိုင်း တင်ဆက်နေပါတယ်။
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားတဲ့ ပြဇာတ်ရုပ်ရှင် အတတ်သင်ကျောင်းပေါ်ထွက်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြင်ပကလောင်ရှင် မေစာ က ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြဇာတ်စာပေ တခေတ်ဆန်းလာရေး မေစာက ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
အခုတပတ် အစီအစဉ်မှာ ကဗျာဆရာကြီး ဆရာမောင်စွမ်းရည်ရဲ့  မြန်မာစာပေ ဝေဖန်ရေးသမိုင်း အကြောင်း ဆောင်းပါးရှင်မေစာက တင်ပြထားပါတယ်။
မောင်စွမ်းရည်ရဲ့  မြန်မာစာပေ ဝေဖန်ရေးသမိုင်း
အခုတပတ်မှာ စာပေဝါသနာရှင်တွေအတွက် စာအုပ်မျိုးစုံ ခင်းကျင်း ရောင်းချနေတဲ့ ရန်ကုန်ဘွတ်ပလာဇာ အကြောင်း ဆောင်းပါးရှင်မေစာက တင်ပြထားပါတယ်။
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ ဒေါက်တာတင်အောင်ရဲ့ အဖေကြီးနဲ့ ခရီးသွားခြင်း စာအုပ်အကြောင်း ဆောင်းပါးရှင်မေစာက ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
ဒေါက်တာတင်အောင်ရဲ့ အဖေကြီးနဲ့ ခရီးသွားခြင်း
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ ကဗျာဆရာကြီး ဦးတင်မိုး အမှတ်တရအဖြစ် ဆောင်းပါးရှင်မေစာက ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးဗဆွေရဲ့ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းစာအုပ် အကြောင်း ဆောင်းပါးရှင်မေစာက ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးဗဆွေရဲ့ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းစာအုပ်
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ မြန်မာဘာသာပြန်စာပေကွန်ရက်အကြောင်း ဆောင်းပါးရှင်မေစာက ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ စာပေညီလာခံက တိုင်းရင်းသားစာပေ ဆွေးနွေးပွဲ အကြောင်း ဆောင်းပါးရှင်မေစာက ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
ပြင်ပဆောင်းပါးရှင် မေစာရဲ့ စာဝိုင်းပေ၀ိုင်းစကားဝိုင်း အစီအစဉ်မှာ အခုတပတ် မြန်မာနိုင်ငံက ကလေးတွေအတွက် ရည်ရွယ်ထုတ်ဝေတဲ့ ဓမ္မစကူးလ် ဖတ်စာအုပ်အကြောင်းကို ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
ပြင်ပဆောင်းပါးရှင် မေစာရဲ့ စာဝိုင်းပေ၀ိုင်းစကားဝိုင်း အစီအစဉ်မှာ အခုတပတ် စာပေသစ်တွေ ထွန်းကားရေးနဲ့အတူ၊ စာဟောင်းပေဟောင်းတွေ မကွယ်ပျောက်ရေး မတိမ်ကောဖို့လည်း အရေးကြီးကြောင်း တင်ပြထားပါတယ်။
စာပေသစ် ထွန်းကားရေးနဲ့ စာဟောင်းပေဟောင်း မကွယ်ပျောက်ရေး
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ ဘာသာစကားအပြောင်းအလဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆောင်းပါးရှင်မေစာက ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ ကလေးငယ်တွေအတွက် အိပ်ယာဝင်ပုံပြင်တွေ ဆီလျော်အောင် တင်ဆက်ပုံအကြောင်း ဆောင်းပါးရှင်မေစာက ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
အိပ်ယာဝင်ပုံပြင်တွေ ဆီလျော်အောင် တင်ဆက်ပုံ
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ ကလေးငယ်တွေအတွက် ဇာတကဝတ္ထုအကြောင်း ဆောင်းပါးရှင်မေစာက ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းရဲ့ “ရေဆန်လမ်းမှ အပြန်” စာအုပ်အကြောင်း ဆောင်းပါးရှင်မေစာက ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
ဒီတပတ်မှာတော့ ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာက မြန်မာစာရေးဆရာကလပ်အကြောင်း အဖွဲ့ဥက္ကဌ ဆရာကောင်းသန့်နဲ့ ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ တင်ပြမယ့် စာဝိုင်းပေ၀ိုင်း စကားဝိုင်း အစီအစဉ်မှာ အခုတပတ်မှာ ကြိုဆိုထိုက်တဲ့ သတင်းစာ အရွေ့အပြောင်း အကြောင်း ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ကိုယ်တိုင် ဖတ်ကြား တင်ပြထားပါတယ်။
ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ တင်ပြမယ့် စာဝိုင်းပေ၀ိုင်း စကားဝိုင်း အစီအစဉ်မှာ အခုတပတ်တော့ ဘာသာပြန်ဆိုကြတဲ့အခါ ထိရောက်မှုရှိဖို့ သတိထားစရာတွေ အကြောင်းကို ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ အပတ်စဉ်တင်ပြနေတာဖြစ်ပြီး ဒီတပတ်မှာတော့ “နှုတ်မှုစွမ်းရည် ပြန်လည်ထွန်းကားရေး” ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဆွေးနွေးထားတာ နားဆင်ရမှာပါ။
ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ တင်ပြမယ့် စာဝိုင်းပေ၀ိုင်း စကားဝိုင်း အစီအစဉ်မှာ ခုတပတ် ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း နှစ်တရာပြည့်အမှတ်တရ “ရာပြည့်မစ္စတာမောင်မှိုင်း” စာအုပ်အကြောင်း ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ တင်ပြမယ့် စာဝိုင်းပေ၀ိုင်း စကားဝိုင်း အစီအစဉ်မှာ ခုတပတ် မြန်မာနိုင်ငံ ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်း သုတေသနပြုနေကြတဲ့ အမေရိက ပညာရှင်များအကြောင်းကို ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်း သုတေသနပြုနေကြတဲ့ အမေရိကပညာရှင်များ
ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ တင်ပြမယ့် စာဝိုင်းပေ၀ိုင်း စကားဝိုင်း အစီအစဉ်မှာ အခုတပတ် အစီအစဉ်မှာ အနောက်နိုင်ငံက ပညာရှင်တဦးရဲ့  ဗုဒ္ဓဘာသာအမြင် အကြောင်းကို ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
အနောက်နိုင်ငံက ပညာရှင်တဦးရဲ့  ဗုဒ္ဓဘာသာအမြင်
ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ တင်ပြမယ့် စာဝိုင်းပေ၀ိုင်း စကားဝိုင်း အစီအစဉ်မှာ အခုတပတ် မြန်မာဘာသာက အယဉ်သုံး စကားများ အကြောင်း ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
ပြင်ပကလောင်ရှင် မေစာ က မြန်မာ့ မော်ဒန်ကဗျာ စာတမ်းရှင်တဦးနဲ့ ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ် ။
မြန်မာ့ မော်ဒန်ကဗျာ စာတမ်းရှင်တဦး
ပြင်ပကလောင်ရှင် မေစာ တင်ပြမယ့် အခုတပတ် အစီအစဉ်မှာ ဘာသာပြန်တဲ့အခါ ဗမာသံ ဗမာဟန် ပီသဖို့ လိုကြောင်း ဆွေးနွေးထားပါတယ်၊ နားဆင်ကြပါ။
ဘာသာပြန်တဲ့အခါ ဗမာသံ ဗမာဟန် ပီသဖို့လို
အခုတပတ်မှာ လူငယ်တွေရဲ့  အားထုတ်မှုတခုဖြစ်တဲ့ ဆေးမင်တံ အွန်လိုင်းစာစောင်အကြောင်း ဆောင်းပါးရှင်မေစာက ဆွေးနွေးထားပါတယ်။ နားဆင်ကြပါ။
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ ပြဇာတ်စာပေ ထွန်းကားရေးအကြောင်း ဆောင်းပါးရှင်မေစာက ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ ခေတ်ပေါ်ကဗျာတွေ နေရာမှန်ရောက်ရေးအကြောင်း ဆောင်းပါးရှင်မေစာက ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ ဆရာကြီး စစ်ကိုင်းဦးဘိုးသင်းရဲ့ ခေတ်မီတဲ့ ပညာရေးအမြင် အကြောင်း ဆောင်းပါးရှင်မေစာက ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
ဆရာကြီး စစ်ကိုင်းဦးဘိုးသင်းရဲ့ ခေတ်မီတဲ့ ပညာရေးအမြင်
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ တက္ကသိုလ်ဘာသာပြန်နဲ့ စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးဌာနအကြောင်း ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာက တင်ပြထားပါတယ်။
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ စာကြည့်တိုက်နဲ့ သုတေသနပညာဌာနအကြောင်း ရတနာပုံတက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်က ကထိက ဦးထွန်းအောင်ကျော်နဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီး ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာက အပိုင်း (၂) အဖြစ် ဆက်လက်တင်ပြထားပါတယ်။
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ စာကြည့်တိုက်နဲ့ သုတေသနပညာဌာနအကြောင်း ရတနာပုံတက္ကသိုလ် စာကြည့်တိုက်က ကထိက ဦးထွန်းအောင်ကျော်နဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီး ပြင်ပကလောင် ရှင်မေစာက တင်ပြထားပါတယ်။
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ မြန်မာ့ရှေးဟောင်းစာပေ အမွေအနှစ် ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာက တင်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာ့ရှေးဟောင်းစာပေ အမွေအနှစ် ထိန်းသိမ်းရေး
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ အငြင်းပယ်ခံ နိုင်ငံရေးစာတမ်းတစ်စောင်အကြောင်း ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာက တင်ပြထားပါတယ်။
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ သမိုင်းအစဉ်အလာနှင့် ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု ဆောင်းပါးများအကြောင်း ပြင်ပကလောင်ရှင် မေစာ က တင်ပြထားပါတယ်။
သမိုင်းအစဉ်အလာနှင့် ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု ဆောင်းပါး
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ မြန်မာစာအရေးအသား ပြဿနာအကြောင်း ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာက တင်ပြထားပါတယ်။
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ စာပေဂီတအနုပညာရှင် စာရေးဆရာအောင်လင်း အကြောင်း ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ က တင်ပြထားပါတယ်။
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ လူငယ်တွေ စာဖတ်ရှိန်မြှင့်တင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာက တင်ပြထားပါတယ်။
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ စာရေးသူ “ဝေးနေသူ” ရဲ့ “ကောင်းကင်တွင်းကမြစ်” စာအုပ်အကြောင်း ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာက တင်ပြထားပါတယ်။
“ဝေးနေသူ” ရဲ့ “ကောင်းကင်တွင်းကမြစ်”
အခုတပတ် ၂၀ရာစု မြန်မာကဗျာ ၁၀၀ စာအုပ်အကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
၂၀ရာစု မြန်မာကဗျာ ၁၀၀ စာအုပ်
ပြင်ပကလောင်ရှင် မေစာ တင်ပြမယ့် စာဝိုင်းပေဝိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ ခုတပတ် မြန်မာကလေးသီချင်း ကဗျာဖွံ့ဖြိုးရေးအကြောင်း ဆွေးနွေး တင်ပြထားပါတယ် နားဆင်ကြပါ။
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ မြန်မာရေးရာ စာအုပ်များအကြောင်း ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာက တင်ပြထားပါတယ်။
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် လူငယ်မဂ္ဂဇင်း အကြောင်း ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာက တင်ပြထားပါတယ်။
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ အများပြည်သူစာဖတ်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ စာနယ်ဇင်းလက်ပွေ့သမားတစ်ဦးရဲ့ အတွေ့အကြုံအကြောင်း ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ က တင်ပြထားပါတယ်။
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ စာရေးဆရာကြီး မောင်ခင်မင် (ဓနုဖြူ) ရဲ့ စာပေဘဝခရီးအကြောင်း ဒုတိယပိုင်းကို ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာက တင်ပြထားပါတယ်။
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ စာရေးဆရာကြီး မောင်ခင်မင်(ဓနုဖြူ)ရဲ့ စာပေဘဝခရီး အကြောင်း ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ က တင်ပြထားပါတယ်။
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ မြန်မာကဗျာသင်ကြားရေး အကြောင်း ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ က တင်ပြထားပါတယ်။
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ သူငယ်တန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ထဲက တေးကဗျာ၊ ပုံပြင်၊ စကားထာတွေ အကြောင်းကို ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာက တင်ပြထားပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ သူငယ်တန်းကလေးတွေကို သင်တဲ့ ဘာသာစကားမှီငြမ်းပြု လမ်းညွှန်စာအုပ်အကြောင်းကို ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာက တင်ပြထားပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဝ တိုင်းရင်းသား စာပေနဲ့ ဘာသာစကားတွေအကြောင်း ဆောင်းပါးရှင် မေစာက တင်ပြထားပါတယ်။
ဝတိုင်းရင်းသား စာပေနဲ့ ဘာသာစကား
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာန စိန်ရတု အထိမ်းအမှတ်ပွဲအကြောင်းကို ဆောင်းပါးရှင် မေစာက တင်ပြထားပါတယ်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာန စိန်ရတု အထိမ်းအမှတ်ပွဲအကြောင်း
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ သိစပ်မြင်နှံ့ သုတေသနဂျာနယ်သစ်အကြောင်း ဆောင်းပါးရှင် မေစာက ဆွေးနွေး တင်ပြထားပါတယ်။
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ တမ္ပဝတီ ဦးဝင်းမောင်ရဲ့ ဆရာကြီး ဦးမောင်မောင်တင် မွေးနေ့အမှတ်တရ စာတမ်းစာအုပ်အကြောင်း တင်ပြထားပါတယ်။
ဆရာကြီး ဦးမောင်မောင်တင် မွေးနေ့အမှတ်တရ စာတမ်းစာအုပ်
အခုတပတ်မှာတော့ ခေတ်ပြိုင်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ စာတမ်းဖတ်ပွဲအကြောင်းကို ဆောင်းပါးရှင် မေစာက တင်ပြထားပါတယ်။
အခုတပတ် စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ တစ်သက်တာ စာပေဆု ရွေးချယ်တဲ့ ပြဿနာ အကြောင်းကို ဆောင်းပါးရှင် မေစာ က တင်ပြထားပါတယ်။
တစ်သက်တာ စာပေဆု ရွေးချယ်တဲ့ ပြဿနာ အကြောင်း
အခုတပတ် စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ မြန်မာစာ မြန်မာစကား အသုံးအနှုန်း မှန်ကန်ရေးအတွက် မယ်ခ မြန်မာ အစီအစဉ် အကြောင်းကို တင်ပြထားပါတယ်။
မယ်ခ မြန်မာ အစီအစဉ်
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ PEN မြန်မာအဖွဲ့က မြန်မာစာပေ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ လွတ်လပ်စွာရေးသားခွင့်၊ ဝတ္ထုတိုစာပေ ပြန့်ပွားရေး စတာတွေအတွက် ကြိုးပမ်းနေတဲ့ အစီအစဉ်တွေအကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
PEN မြန်မာအဖွဲ့ရဲ့ ကြိုးပမ်းနေမှု
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ မြန်မာကို ကမ္ဘာသိအောင်ကြိုးစားနေတဲ့ ပင်န် အင်တာနေရှင်နယ် (PEN International) ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင် မသီတာ(စမ်းချောင်း) နဲ့ ဆွေးနွေးခန်းကို တင်ပြထားပါတယ်။
မသီတာ(စမ်းချောင်း) နဲ့ ဆွေးနွေးခန်း
မြန်မာကို ကမ္ဘာသိအောင် ကြိုးစားနေတဲ့ ကဗျာဆရာ ကိုကိုသက် အကြောင်း ဒုတိယပိုင်းအဖြစ် ပြင်ပကလောင်ရှင် မေစာက ဒီတစ်ပတ်တင်ပြထားပါတယ်။
ကဗျာဆရာ ကိုကိုသက် အကြောင်း
အမေရိကန်နိုင်ငံ မြောက်အီလီနွိုက်တက္ကသိုလ်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ မြန်မာစာနှီးနှောဖလှယ်ပွဲက စာတမ်း ၃ စောင်အကြောင်း ပြင်ပကလောင်ရှင် မေစာ ဆွေးနွေးတင်ပြထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
မြန်မာစာနှီးနှောဖလှယ်ပွဲက စာတမ်း ၃ စောင်
အခုတပတ်မှာတော့ အဆင်ခြင်ကင်းမဲ့တဲ့ကာလက ပျက်ပြိုသွားခဲ့တဲ့ ပညာရေး အဆောက်အုံတွေအကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
ပျက်ပြိုသွားခဲ့တဲ့ ပညာရေး အဆောက်အုံတွေ
အခုတပတ်မှာ မန်လည်ဆရာတော်ရဲ့ လေးဆစ်ကဗျာ တပုဒ်အကြောင်း ပြင်ပကလောင်ရှင် မေစာက တင်ပြထားပါတယ်။
အခုတပတ်မှာ ကျောင်းတွေမှာ မြန်မာသဒ္ဒါသင်ကြားရေးရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုအကြောင်း ပြင်ပကလောင်ရှင် မေစာက တင်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာသဒ္ဒါ သင်ကြားရေးရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှု
အခုတပတ်မှာ "သခင်သန်းထွန်း၏ နောက်ဆုံးနေ့များ" စာအုပ်မှာတွေ့ရှိရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးသမိုင်း အကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
အခုတစ်ပတ်မှာ အကောင်းဘက်ကို ရွေ့နေတဲ့ နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာကြီးတွေအကြောင်း ဆောင်းပါးရှင်က ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ အသုံးအနှုန်းမှားတဲ့ အရေးအသားတချို့အကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ စာရေးဆရာမ နုနုရည်အင်းဝ၊ မောင်သာချိုတို့နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက စာပေဟောပြောပွဲ ယဉ်ကျေးမှု အကြောင်း ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ အဆင့်မြင့်ပညာ ပညာရပ်စာတမ်းတွေ ပေါ်ထွန်းရေးအကြောင်း ဆောင်းပါးရှင် မေစာ ဆွေးနွေးတင်ပြထားတာ နားဆင်ရမှာပါ။
အဆင့်မြင့်ပညာ ပညာရပ်စာတမ်းတွေ ပေါ်ထွန်းရေး
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ မြန်မာကလေးတွေ မြန်မာစာသင်ကြားရေးမှာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ နားထောင်မှု အရည်အသွေးပြဿနာအကြောင်း ဆောင်းပါးရှင် မေစာ ဆွေးနွေးတင်ပြထားတာ နားဆင်ရမှာပါ။
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ စကားအသုံးအနှုန်း ပြဿနာကို ဆောင်းပါးရှင် မေစာ ဆွေးနွေးတင်ပြထားတာ နားဆင်ရမှာပါ။
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ တက္ကသိုလ်ဆရာမတစ်ဦးရဲ့ မြန်မာ့ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆောင်းပါးရှင် မေစာ ဆွေးနွေးတင်ပြထားတာ နားဆင်ရမှာပါ။
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ အလေးထားစဉ်းစားသင့်တဲ့ စာရေးဆရာမ ခေတ်ဘုန်းသစ်ရဲ့ စာပေအကြောင်း ဆောင်းပါးရှင်မေစာ ဆွေးနွေးတင်ပြထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
စာရေးဆရာမ ခေတ်ဘုန်းသစ်ရဲ့ စာပေ
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ စာရေးဆရာကြီး မောင်သာရအကြောင်း မေစာ ဆွေးနွေးတင်ပြထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ ရခိုင်ဝေါဟာရ အဘိဓါန်ကြီးအကြောင်း ဆောင်းပါးရှင် မေစာ ဆွေးနွေးတင်ပြထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ သင်ရိုးသစ် မြန်မာစာပြုစုရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆောင်းပါးရှင်မေစာ ဆွေးနွေးတင်ပြထားတာ နားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ မြန်မာစာ မြန်မာစကား အရေးအသား အပြောဆိုမှာ အသုံးအနှုန်း ရွေးချယ်တတ်ဖို့ ဆောင်းပါးရှင်မေစာ ဆွေးနွေးတင်ပြထားတာ နားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ မကြာမီက ထုတ်ဝေလိုက်တဲ့ လူထုဒေါ်အမာရဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်အကြောင်း ဆောင်းပါးရှင်မေစာ ဆွေးနွေးတင်ပြထားတာ နားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အိုင်အိုဝါတက္ကသိုလ်ရောက် မြန်မာစာရေးဆရာတွေ စုပေါင်းရေးသားထားတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ထွက်လာတဲ့အကြောင်း ဆောင်းပါးရှင်မေစာ ဆွေးနွေးတင်ပြထားတာ နားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ နုနုရည် (အင်းဝ) ရဲ့ ကမ္ဘာသိ စာအုပ်တစ်အုပ်အကြောင်း ဆောင်းပါးရှင် မေစာက ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
နုနုရည် (အင်းဝ) ရဲ့ ကမ္ဘာသိစာအုပ်
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ နိုဘယ်မြန်မာ စာပေပွဲတော် ၂၀၁၆ အကြောင်း ဆောင်းပါးရှင် မေစာက ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ မြန်မာဘာသာစကားကို နိုင်ငံခြားဘာသာစကားအဖြစ် သင်ကြားရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ညီလာခံအကြောင်း ဆောင်းပါးရှင် မေစာက ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ စိတ်အားတက်စရာ စာတစ်အုပ်အကြောင်း ဆောင်းပါးရှင် မေစာက ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံက စာရေးဆရာတွေရဲ့ ပေါင်းစည်းလုပ်ဆောင်မှုအကြောင်း ဆောင်းပါးရှင် မေစာက ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ မြန်မာစာပေဆိုင်ရာ စာအုပ်စာတမ်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆောင်းပါးရှင် မေစာက ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ ပန်မြန်မာအဖွဲ့ (Pen Myanmar) ရဲ့ စာပေလှုပ်ရှားမှု အကြောင်းတွေကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်
Pen Myanmar အဖွဲ့ရဲ့ စာပေလှုပ်ရှားမှု
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ စာရေးဆရာ မောင်သာချိုရဲ့ အတွေးအမြင် အကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်
စာရေးဆရာ မောင်သာချိုရဲ့ အတွေးအမြင်
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ မြန်မာစကားပြောပုံ စည်းကမ်းဥပဒေများအကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ လူထုဒေါ်အမာ ရာပြည့်မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဂုဏ်ပြုပွဲအကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ စာရေးဆရာ ဣနြေ္ဒ အကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
စာရေးဆရာ ဣနြေ္ဒ အကြောင်း
ဒီတစ်ပတ် မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးမှာ အတန်းတွင်း လက်တွေ့သင်ကြားပုံ သင်ကြားနည်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ် မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးမှာ စနစ်တကျပြုစုထားတဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများရဲ့အခန်းကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ် အမျိုးသားစာကြည့်တိုက် ဂုဏ်သိရ်မြင့်မားရေးအကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ် ကလေးစာပေဖွံ့ဖြိုးရေးအကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ် တက္ကသိုလ်တွေမှာ မြန်မာစာသင်ကြားရေးအကြောင်း ဆောင်းပါးရှင် မေစာက ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ် မြန်မာစာသင်ကြားရေးမှာ ကြိုဆိုသင့်တဲ့ မြန်မာစာအတတ်သင်ကျောင်း စာအုပ်အကြောင်း ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ ဆွေးနွေး တင်ပြထားတာနားဆင်နိုင်ပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ် စဉ်းစားချင်စရာ မြန်မာဝေါဟာရတချို့အကြောင်း ပြင်ပကလောင်ရှင် မေစာက ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ် စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး အင်ဒိုနီးရှားဝတ္တုတို တစ်ပုဒ်အကြောင်း ပြင်ပကလောင်ရှင် မေစာက တင်ပြထားပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ် စာဝိုင်းပေဝိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ ဆရာကြီး သခင်ဘသောင်း ရေးသားခဲ့တဲ့ “ဒီမိုကရေစီဆိုဒါ” ဆိုတဲ့ စာအုပ်အကြောင်း ပြင်ပကလောင်ရှင် မေစာ ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ် စာဝိုင်းပေဝိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ စာရေးရာမှာ တွေ့ရတဲ့ အသုံးအနှုန်းအမှားတချို့အကြောင်း ပြင်ပကလောင်ရှင် မေစာက ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ် စာဝိုင်းပေဝိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေထဲက သတင်းရေးသားပုံ ပုဒ်အထားအသိုတွေအကြောင်း ပြင်ပကလောင်ရှင် မေစာက ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ် စာဝိုင်းပေဝိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ မြန်မာစာပေကို လမ်းသစ်ထွင်ခဲ့သူ ၀န်ကြီးပဒေသရာဇာအကြောင်း ပြင်ပကလောင်ရှင် မေစာက ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ် စာဝိုင်းပေဝိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ ကုမုဒြာဂျာနယ်ထဲက ဘကြီးမိုးရဲ့ သရော်စာဆောင်းပါးတွေ အကြောင်း ပြင်ပကလောင်ရှင် မေစာက ဆွေးနွေးတင်ပြထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
ကုမုဒြာဂျာနယ်ထဲက ဘကြီးမိုးရဲ့ သရော်စာဆောင်းပါးတွေ အကြောင်း
ဒီတစ်ပတ် စာဝိုင်းပေဝိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ မြန်မာအမျိုးသမီးစာရေးဆရာမတွေရဲ့ ရုပ်ပုံလွှာတွေ အကြောင်း ပြင်ပကလောင်ရှင် မေစာ ဆွေးနွေးတင်ပြထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
မြန်မာအမျိုးသမီးစာရေးဆရာမတွေရဲ့ ရုပ်ပုံလွှာတွေ အကြောင်း
ဒီတစ်ပတ် စာဝိုင်းပေဝိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံက သတင်းသမားတွေရဲ့ ပြောဆိုရေးသားနေပုံတွေအကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ် စာဝိုင်းပေဝိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ မြန်မာစကားအသံထွက်ပြဿနာအကြောင်း ပြင်ပကလောင်ရှင် မေစာက ဆွေးနွေး တင်ပြထားပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ် စာဝိုင်းပေဝိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံက ပညာရေးခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးရာဇတ်အကြောင်း ကလောင်ရှင် မေစာက ဆွေးနွေးတင်ပြထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ် စာဝိုင်းပေဝိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ မြန်မာစာပေလောကမှာ လိုအပ်နေတဲ့ အညွှန်းစာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြင်ပကလောင်ရှင် မေစာက ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ် စာဝိုင်းပေဝိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ ဘာသာစကားအကြောင်း ပြောဆိုရာမှာ သတိထားသင့်တာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြင်ပကလောင်ရှင် မေစာက ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ တင်ပြနေတဲ့ စာဝိုင်းပေဝိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ အခုတစ်ပတ်မှာတော့ မြန်မာနဲ့တရုတ် အချင်းချင်းနားလည်ရေးဆိုင်ရာ ဘာသာစကား စာအုပ်တစ်အုပ်အကြောင်း ပြင်ပကလောင်ရှင် မေစာက တင်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာနဲ့တရုတ် နားလည်ရေးဆိုင်ရာ စာအုပ်တစ်အုပ်
ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ တင်ပြနေတဲ့ စာဝိုင်းပေဝိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ အခုတစ်ပတ်မှာတော့ စာရေးသူနဲ့ သူ့အနုပညာဆက်စပ်နေပုံတွေအကြောင်း ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာက ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
စာရေးသူနဲ့ သူ့အနုပညာ ဆက်စပ်နေပုံ
ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ တင်ပြနေတဲ့ စာဝိုင်းပေဝိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ အခုတစ်ပတ်မှာတော့ ဆရာကြီး သခင်ဗသောင်းရဲ့ အမှီးဝတ္ထုရေးသားရာမှာ အားထုတ်ပုံအကြောင်း ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ ဆွေးနွေးတင်ပြထားတာ နားဆင်နိုင် ပါတယ်။
ဆရာကြီး သခင်ဗသောင်းရဲ့ အမှီးဝတ္ထု
ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ တင်ပြနေတဲ့ စာဝိုင်းပေဝိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ အခုတစ်ပတ်မှာတော့ တိုင်းရင်းသားတွေ မြန်မာဘာသာ မြန်မာစာသင်ကြားရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
တိုင်းရင်းသားတွေ မြန်မာစာ သင်ကြားရေး
ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ တင်ပြနေတဲ့ စာဝိုင်းပေဝိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ အခုတစ်ပတ်မှာတော့ မှော်ပီဆရာသိန်းရဲ့ နိုင်ငံရေးအမြင် စာအုပ်အကြောင်း ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
မှော်ပီဆရာသိန်းရဲ့ နိုင်ငံရေးအမြင် စာအုပ်အကြောင်း
ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ တင်ပြနေတဲ့ စာဝိုင်းပေဝိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ အခုတစ်ပတ်မှာတော့ ပြောစကားထဲမှာ ရေးဟန်တွေပါနေတဲ့ပြဿနာအကြောင်း ဆောင်းပါးရှင်မေစာက ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
ပြောစကားထဲမှာ ရေးဟန်တွေပါနေတဲ့ ပြဿနာအကြောင်း
ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ တင်ပြနေတဲ့ စာဝိုင်းပေဝိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ အခုတစ်ပတ်မှာတော့ မြန်မာရုပ်ပြကလေးစာပေအကြောင်း ဆောင်းပါးရှင် မေစာတင်ပြထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ တင်ပြနေတဲ့ စာဝိုင်းပေဝိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ အခုတစ်ပတ်မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံက စာကြည့်တိုက်တွေ အကျိုးရှိရှိ အသုံးချနိုင်ရေး ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ ဆွေးနွေးတင်ပြထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက စာကြည့်တိုက်တွေ အကျိုးရှိရှိ အသုံးချနိုင်ရေး
ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ တင်ပြနေတဲ့ စာဝိုင်းပေဝိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ အခုတစ်ပတ်မှာတော့ အမျိုးသားပညာဝန် ဦးဖိုးကျားရဲ့ မြန်မာ့ဂုဏ်ရည် ရာဇ၀င်ဖတ်စာအကြောင်း ပြင်ပဆောင်းပါးရှင် မေစာက တင်ပြထားပါတယ်။
ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ တင်ပြနေတဲ့ စာဝိုင်းပေဝိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ အခုတစ်ပတ်မှာတော့ အမျိုးသားပညာဝန် ဦးဖိုးကျားရဲ့ ပညာရေး အဆိုအမိန့် တစ်ရပ်အကြောင်း ပြင်ပဆောင်းပါးရှင် မေစာက တင်ပြထားပါတယ်။
အမျိုးသားပညာဝန် ဦးဖိုးကျားရဲ့ ပညာရေး အဆိုအမိန့်
ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ တင်ပြနေတဲ့ စာဝိုင်းပေဝိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ အခုတစ်ပတ်မှာတော့ မြန်မာဝတ္ထုအညွှန်း စာအုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ ပြင်ပကလောင်ရှင် မေစာက တင်ပြထားပါတယ်။
ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ တင်ပြနေတဲ့ စာဝိုင်းပေဝိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ အခုတစ်ပတ်မှာတော့ အမရပူရ မဟာဂန္ဓာရုံ ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ သီလတရားတော်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြင်ပကလောင်ရှင် မေစာက ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
မဟာဂန္ဓာရုံ ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ သီလတရားတော်
ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ တင်ပြနေတဲ့ စာဝိုင်းပေဝိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ အခုတစ်ပတ်မှာတော့ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း မြန်မာစာမေးခွန်းလွှာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြင်ပကလောင်ရှင် မေစာက တင်ပြထားပါတယ်။
ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ တင်ပြနေတဲ့ စာဝိုင်းပေဝိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ အခုတစ်ပတ်မှာတော့ စာအုပ်ပြပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး စာအုပ်ကုန်သည်တစ်ဦးရဲ့အမြင်ကို ဆွေးနွေးထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ တင်ပြနေတဲ့ စာဝိုင်းပေဝိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ အခုတစ်ပတ်မှာတော့ စာအုပ်ဟောင်း ဖြန့်ချီသူတစ်ဦးအကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ တင်ပြနေတဲ့ စာဝိုင်းပေဝိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ အခုတစ်ပတ်မှာတော့ ဖက်ဆစ်နိုင်မော်ကွန်းအကြောင်း ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာက တင်ပြထားပါတယ်။
ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ တင်ပြနေတဲ့ စာဝိုင်းပေဝိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ အခုတစ်ပတ်မှာတော့ အာဏာရှင်ခေတ်ရဲ့ ဆင်ခြင်စရာကောင်းတဲ့ အပြုအမူတချို့ အကြောင်း ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ တင်ပြထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ တင်ပြနေတဲ့ စာဝိုင်းပေဝိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ အခုတစ်ပတ်မှာတော့ မြန်မာစာပေဝေဖန်ရေး အနှစ် ၂၀ ခရီး စာအုပ်အကြောင်း ပြင်ပကလောင်ရှင် မေစာ ဆွေးနွေးတင်ပြထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
မြန်မာစာပေဝေဖန်ရေး အနှစ် ၂၀ ခရီး စာအုပ်
ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ တင်ပြနေတဲ့ စာဝိုင်းပေဝိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ အခုတစ်ပတ်မှာတော့ စာရေးဆရာမောင်သာချိုရဲ့ ခရီးသွားဆောင်းပါးတွေအကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ တင်ပြနေတဲ့ စာဝိုင်းပေဝိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ အခုတစ်ပတ်မှာတော့ စာပေဟောပြောပွဲတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ စာဖတ်သူတစ်ဦးရဲ့အမြင်ကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ တင်ပြနေတဲ့ စာဝိုင်းပေဝိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ အခုတစ်ပတ်မှာတော့ စာဖတ်ဝါသနာရှင် အငှားယာဉ်မောင်း လူငယ်လေးတစ်ဦးအကြောင်း ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ တင်ပြနေတဲ့ စာဝိုင်းပေဝိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ အခုတစ်ပတ်မှာတော့ နိုဘယ်မြန်မာစာပေပွဲတော်နဲ့ ပြဇာတ်တစ်ခေတ်ဆန်းရေး ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ တင်ပြနေတဲ့ စာဝိုင်းပေဝိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ အခုတစ်ပတ်မှာတော့ စာရေးဆရာ ဒေါက်တာတင်မောင်ကြည် ရေးသားတဲ့ ဂျွန်နဲ့ ဂျယ်ရီတို့ရဲ့ အာပလာပုံပြင်များစာအုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးထားပါတယ်။
ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ တင်ပြနေတဲ့ စာဝိုင်းပေဝိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ အခုတစ်ပတ်မှာတော့ ဘာသာစကားယဉ်ကျေးမှု အပြောင်းအလဲတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ တင်ပြနေတဲ့ စာဝိုင်းပေဝိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ အခုတစ်ပတ်မှာတော့ ၀တ္တုတိုရေးသားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးထားပါတယ်။ ဆွေးနွေးထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ တင်ပြနေတဲ့ စာဝိုင်းပေဝိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ အခုတစ်ပတ်မှာတော့ အင်္ဂလိပ်စာပေ သင်ကြားရေးမှာ ၀တ္တုတိုသင်ကြားပုံအကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။ ဆွေးနွေးထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ တင်ပြနေတဲ့ စာဝိုင်းပေဝိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ အခုတစ်ပတ်မှာတော့ အဂတိတရားနဲ့ အရေးအသားအကြောင်း ဆွေးနွေးထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ တင်ပြနေတဲ့ စာဝိုင်းပေဝိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ အခုတစ်ပတ်မှာတော့ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်အတွက် တစ်သက်တာ အမျိုးသားစာပေဆုရ စာရေးဆရာကြီးသုံးဦးအကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
တစ်သက်တာ အမျိုးသားစာပေဆုရ စာရေးဆရာကြီးသုံးဦး
ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ တင်ပြနေတဲ့ စာဝိုင်းပေ၀ိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ အခုတစ်ပတ်မှာတော့ မြန်မာရာဇဝင်မှာတွေ့ရတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးစကားနဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ အခွင့်အာဏာအကြောင်း ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးစကားနဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ အခွင့်အာဏာ
ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ တင်ပြနေတဲ့ စာဝိုင်းပေ၀ိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ အခုတစ်ပတ်မှာတော့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်က နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး ပညာရှင်တစ်ဦးနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတာ နားဆင်ရပါမယ်။
ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ တင်ပြနေတဲ့ စာဝိုင်းပေ၀ိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ အခုတစ်ပတ်မှာတော့ ကွယ်လွန်သူ စာရေးဆရာကြီး ဦးအောင်သင်း ထားရစ်ခဲ့တဲ့ အမွေတစ်ရပ်အကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
ဦးအောင်သင်း ထားရစ်ခဲ့တဲ့ အမွေတစ်ရပ်အကြောင်း
ပြင်ပကလောင်ရှင် မေစာတင်ပြနေတဲ့ စာဝိုင်းပေ၀ိုင်း စကားဝိုင်း အစီအစဉ်မှာ အခုတစ်ပတ်မှာတော့ မြန်မာစာအဖွဲ့က ထုတ်ဝေတဲ့ မြန်မာစကားစာအုပ်အကြောင်း တင်ပြထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ တင်ပြနေတဲ့ စာဝိုင်းပေ၀ိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ အခုတစ်ပတ်မှာတော့ ပြဓါနနဲ့ အဓိကကွာခြားပုံအကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ တင်ပြနေတဲ့ စာဝိုင်းပေ၀ိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ အခုတစ်ပတ်မှာတော့ မြန်မာသဒ္ဒါနဲ့ အသုံးအနှုန်းအကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာ တင်ပြနေတဲ့ စာဝိုင်းပေ၀ိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ ခုတစ်ပတ်မှာတော့ အောက်ခြေလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အခြေအနေနဲ့ နိုင်ငံရေးဆက်စပ်မှုအကြောင်း ဆွေးနွေးထားတာကို နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
အောက်ခြေလူ့အဖွဲ့အစည်း အခြေအနေနဲ့ နိုင်ငံရေးဆက်စပ်မှု
ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာတင်ပြနေတဲ့ စာဝိုင်းပေ၀ိုင်း စကားဝိုင်း အစီအစဉ်မှာ အခုတစ်ပတ်မှာတော့ ဓမ္မစေတီမင်းအကြောင်းနဲ့ မွန်-မြန်မာစာပေးများဖော်ထုတ်ရေးကိစ္စ ဆွေးနွေးထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
စာရေးဆရာမ မေစာ တင်ပြနေတဲ့ စာဝိုင်းပေ၀ိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ ခုတစ်ပတ်မှာတော့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ စာပေအနုပညာရှင်တွေ တွေ့ဆုံပွဲအကြောင်း တင်ပြထားပါတယ်။
စာရေးဆရာမ မေစာတင်ပြနေတဲ့ စာဝိုင်းပေ၀ိုင်း စကားဝိုင်း အစီအစဉ်မှာ အခုတစ်ပတ်မှာတော့ ပြည်သူတွေ စာဖတ်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်နေကြပုံအကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
ပြင်ပကလောင်ရှင် မေစာ တင်ပြနေတဲ့ စာဝိုင်းပေ၀ိုင်း စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ အခုတစ်ပတ်မှာတော့ နန်းတော်ရှေ့ဆရာတင်ရဲ့ နိုင်ငံရေးအသိနဲ့ သတိအကြောင်း ဆွေးနွေးထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
စာရေးဆရာမ မေစာ တင်ပြနေတဲ့ ‘စာဝိုင်း ပေ၀ိုင်း၊ စကားဝိုင်း’ အစီအစဉ်မှာ အခုတစ်ပတ်တော့ ခေါင်းဆောင်အကြောင်းရေးသားထားတဲ့ စာအုပ်တွေအကြောင်း ဆွေးနွေးထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
ပြင်ပကလောင်ရှင် မေစာတင်ပြနေတဲ့ စာဝိုင်းပေ၀ိုင်း စကားဝိုင်း အစီအစဉ်မှာ အခုတစ်ပတ်မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံက ၀န်ထမ်းစည်းမျဉ်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ မြန်မာစာအုပ်ထုတ်ဝေရေးလောကအကြောင်း ဆွေးနွေးထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ်တော့ အခြေခံပညာ မြန်မာဖတ်စာများအရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ တက္ကသိုလ်ပြင်ပ စာရေးဆရာတွေနဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေဆက်ဆံရေးအကြောင်း ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ စာရေးဆရာကြီး ရွှေဒုံးဘီအောင်ရဲ့ ဗိုလ်အောင်ဒင်ဇာတ်လမ်းက မြန်မာမှု အလေးထားပုံအကြောင်း တင်ပြထားပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ်မှာ ရှေးဘုရင်များလက်ထက်က မြန်မာစာပေသဘောထားတွေ ပြောင်းလဲခဲ့ပုံအကြောင်းကို တင်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးစာအုပ်တွေရေးသားတဲ့ စာရေးဆရာ နောင်ကျော်ရဲ့ နိုင်ငံရေးစာအုပ်များအကြောင်း ပြင်ပကလောင်ရှင်မေစာက အခုတစ်ပတ် ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
အခုတစ်ပတ်အစီအစဉ်မှာ စာရေးဆရာမောင်သာချိုရဲ့ အတွေးအမြင် အရေးအသားတွေကို ဆောင်းပါးရှင် မေစာ ကတင်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာရှေးဟောင်းစာပေ သုတေသီတစ်ဦးနဲ့ မြန်မာရှေးဟောင်းစာပေများအကြောင်း ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
အခုတစ်ပတ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပျူဘာသာ လေ့လာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
အခုတစ်ပတ်မှာ မြစ်သားမြို့ ပေတောကုန်းကျောင်းတိုက်မှာ အသစ်တွေ့ရတဲ့ ကျောက်စာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
အခုတပတ်မှာ ဆရာကြီး ဟံသာဝတီဦးဝင်တင်ရဲ့ ဝေဖန်ရေးအလေ့အကျင့်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
ဒီတပတ်မှာတော့ စာပေတွေထဲက မန်းစက်တော်ရာအကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
အခုအပတ်မှာတော့ ရှေးမြန်မာမင်းများလက်ထက်က စစ်တမ်းတွေအကြောင်း ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
ဒီတပတ်မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ မြို့ရွာတွေကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖော်ပြထားတဲ့ မြို့ရွာအဘိဓါန်ရှိသင့်တဲ့အကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ စေတီဘုရားရွှေ့ပြောင်းရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
အခုတစ်ပတ်မှာ မြန်မာစကားပေါင်း အသံထွက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ မြန်မာစကားလုံး အသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ မကောင်းတဲ့ အစဉ်အလာရှေးထုံးတွေကို ပယ်သင့်ရင် ပယ်ဖျက်ရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
မကောင်းတဲ့ အစဉ်အလာရှေးထုံးတွေကို ပယ်သင့်ဖို့
အခုတစ်ပတ်မှာ တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားသိပ္ပံ ပေါ်ထွက်လာရေး ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ၁၉၆၂ ခုနှစ်မတိုင်ခင် အချုပ်အချယ်မဲ့ခေတ်က မန္တလေးတက္ကသိုလ် သုတေသနအဖွဲ့ရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေအကြောင်း ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
မန္တလေးတက္ကသိုလ် သုတေသနအဖွဲ့ရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်
ဒီတပတ်မှာတော့ ဘာသာစကား အသံထွက် အပြောင်းအလဲသဘောအကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
ဘာသာစကား အသံထွက် အပြောင်းအလဲ
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ကိုလိုနီခေတ်က မြန်မာ့ပညာရေးကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းက မြှင့်တင်ပေးခဲ့တဲ့ ဆရာတော်တစ်ပါးအကြောင်း တင်ပြထားပါတယ်။
ကိုလိုနီခေတ်က မြန်မာ့ပညာရေးကို မြှင့်တင်ပေးခဲ့တဲ့ ဆရာတော်တစ်ပါး
ဒီတပတ်မှာတော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းပညာ စနစ်တကျ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့ ပညာဌာနကြီးတွေ လိုအပ်နေတဲ့အကြောင်း တင်ပြထားပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ဇတ်ညွှန်းပညာ သင်ကြားပေးတဲ့ဌာနများ လိုအပ်
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ကလေးငယ်တွေ သင်အံရွက်ဖတ်နေရတဲ့ ကကြီးခခွေး အက္ခရာကဗျာအကြောင်း ဆွေးနွေး တင်ပြထားပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ မူလတန်း မြန်မာဖတ်စာဟောင်းတွေထဲက မွမ်းမံစရာ အကွက်တစ်ကွက်အကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
မူလတန်း မြန်မာဖတ်စာထဲက မွမ်းမံစရာ အကွက်တစ်ကွက်
ဒီတပတ်မှာတော့ ဦးသိန်းဖေမြင့်ရဲ့ တက်ဘုန်းကြီးဝတ္ထုနဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးနုအကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြ
၁၄ ရက်နေ့က ထုတ်လွင့်သွားသော - ဂျွန်နှင့်ဂျယ်ရီတုို့၏ အာပလာ ပုံပြင်များ - အကြောင်း စာဝုိုင်းပေဝုိုင်း စကားဝိုင်းမှာ ကြားလုိုက်ရတော့ အတော် အံ့အောရပါသည်။
စီတ်ဝင်စားလုို့ အများသိအောင် ဖြန့်ဝေနုိုင်ရန် လုင်းပေါ်မှာ ရှာပေမဲ့ မတွေ့၇လုို့ပါ ထုိုအသံဖုိုင်ကုို အပါတ်စဉ်ကဏ္ဍမှာ အမြန်တင်ပေးပါလား။
Jan 14, 2015 08:03 PM
RFA ဝိုင်းတော်သားများ မေစာရဲ့ "ထုံးမီစံမျှ အသုံးအနှုန်းနဲ့ ခေတ်ပေါ်မြန်မာစကား အသုံးအနှုန်း" ကို ဂရုစိုက်နားထောင်ပြီး လိုက်နာကျင့်သုံးကြဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် "သောရှင်တွေ မင်္ဂလာပါ" လို့ နှုတ်ခွန်းဆက်သံကအစ ဆင်ခြင်နိုင်ကြပါစေ။
Oct 03, 2013 03:22 PM
Maung Ne Hein
Dear May Zar:
Re: Appreciation Notes
It was excellent verification on the meaning of “Healthy Skepticism (scepticism)” in the RFA radio program.
You are doing great in many ways.
And, thank you for all your knowledge base contribution in this Thursday program.
I had missed my high school days in Burma due to we never encounteredagood Burmese language teacher except memorizing all by heart.
Jun 16, 2012 04:14 PM